INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2018 – Australia Myanmar Institute
Home » News » News » INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2018
INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2018: AUSTRALIA MYANMAR COOPERATION
The Australia Myanmar Institute (AMI) welcomes International Women’s Day and is proud to join with organisations in Australia and Myanmar celebrating this important day and its message of equality. Gender equality isacentral theme addressed by AMI in its efforts to link Australian people, civil society organisations, business, professionals and institutions with counterparts, friends and colleagues in Myanmar. In November 2017 AMI organisedahighly successful international conference at Yangon University in which many papers addressed issues of the role of women in development, peace building, education, and the economy. Panel discussions dedicated to gender deepened the discussion and will provide excellent state of the art research and programmatic thinking in an upcoming publication. These inspirational women leaders throughout Myanmar, whether in local communities or in government, academia or the private sector are resilient and committed to challenging deep social norms and overcoming major obstacles. The conference showed and AMI believes that when women lead, everyone benefits. We congratulate our friends at the International Women’s Development Agency (IWDA) on their work in Myanmar. We are excited to announce that later in March 2018adelegation of women parliamentarians from Myanmar will visit Australia for meetings and mentoring sessions in Canberra and Melbourne. We will post more about this as the visit proceeds.
(photo: Myanmar women parliamentarians in Melbourne in 2017)
ဓါတ်ပုံ – မြန်မာအမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မဲဘန်း မြို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်
၂၀၁၈ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့တွင် သြစတြေးလျ မြန်မာ အင်စတီကျု့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်
သြစတြေးလျ မြန်မာ အင်စတီကျု့ မှ သြစတြေးလျ နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် ကျင်းပသော ကျားမ တန်းတူညီမျှမှု ကိုဖော်ကျူးသည့်နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျားမ တန်းတူညီမျှမှုသည် သြစတြေးလျ မြန်မာ အင်တတီကျု(အေအမ်အိုင်) AMI၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံမှ ပြည်သူများ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်မြန်မာနိုင်ငံမှ မိတ်ဆွေများ နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ အလားတူအဖွဲ့အစည်းများကို ဆက်သွယ်ပေါင်းစပ်ပေးခြင်းကို (အေအမ်အိုင်) ကကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း (အေအမ်အိုင်) AMI၏ စည်းရုံးမှုဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲညီလာခံ၌အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ပညာရေး..နှင့်စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ စာတမ်းများကို ဖတ်ကြား တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ သည်။ အစုအဖွဲလိုက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျားမ တန်းတူညီမျှရေးကို အထူးအလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အသေးစိတ် သုတေသန ပြုဖော်ပြချက်များ နှင့် အစီအစဉ်တကျ တွေးခေါ်ချက်များကို ပုံနှိပ်ဖော်ပြရန်လည်း ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တနံတလျားမှ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ ပညာရှင်များ လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များဟာ ကြံ့ခိုင်သောစိတ်လုံ့လ ရှိသူများဖြစ်ပြီး လူမှုနယ်ပယ် အတွင်းအရိုးစွဲနေသော အယူအဆများ ကို စိန်ခေါ်ကာ ကြီးမားလှသော အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်လျှင် လူတိုင်း အကျိုးရှိစေနိုင်ကြောင်း (အေအမ်အိုင်) AMI ကယုံကြည်ထားသည့်အတိုင်း ညီလာခံ၏ ရလာဒ်များကလည်းဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဌာန အိုင်ဒဗလျူ ဒီအေ IWDA ၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုများအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်မတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ သြစတြေးလျ နိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ အစည်းအဝေးများ အသိပညာဖလှယ်သည့်ဆွေးနွေးပွဲများ ကွပ်ကဲမှုသင်တန်းများကို ကန်ဘာရာ နှင့် မဲဘန်းမြို့များတွင် တက်ရောက်မည်ကို ကြားသိရ၍ စိတ်လှုပ်ရှား ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ အလည်အပတ် ရောက်ရှိမည့် အချိန်တွင် ထပ်လောင်း၍ အကြောင်းကြား အသိပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
← AMI February Seminar
AMI Monthly Seminar_March 2018 →